FAMPAHALALANA SY SARY MITERAKA ALIKA BEAUCERON - ALIKA
Fampahalalana sy sary miteraka alika Beauceron
'Ity no Classie' Ellita 'de Nanrox amin'ny 6 monthe old. Mandray anjara amin'ny haingam-pandeha sy ny fiompiana izy ary tsy ho ela dia hanomboka flyball, scenting ary skijoring isika. Mangina tokoa izy ao an-trano ary tia milalao fakana ivelany. '
Lisitry ny alika mifangaro Beauceron
Alika lehibe, atletisma ary miasa ny Beauceron. Somary lava kokoa noho ny hahavony ny vatana. Ny loha dia lava sy mifanaraka amin'ny vatana. Ny karandohany dia mitovy halava amin'ny vava tery, maranitra na malalaka be loatra. Voatonona kely ny fijanonana. Ny maso mainty volontany dia marindrano ary somary boribory boribory. Ny antsasaky ny voatsindrona na ny sofina mitete dia apetraka avo, na voakapa na avela voajanahary. Ny fenitra AKC dia mitaky famoahana hetra avo roa heny amin'ny tongotra aoriana ary manala ny alika tsy manana azy ireo. Ny rambony dia somotraviavina, entina ambany mahatratra farafaharatsiny amin'ny hock mamorona endrika 'J.' Ny palitao fohy malefaka sy fohy dia manana volo lava kokoa amin'ny rambony sy ny aoriana. Mafy ny palitao ivelany raha malefaka sy landy kosa ny akanjo ambany. Izy io dia tonga mainty miaraka amin'ny marika samihafa sy amin'ny palitao harlequin tsy dia fahita miaraka amin'ny fofona volondavenona sy mainty ary mainty. Ny palitao harlequin dia tokony hanana mainty kokoa noho ny volondavenona tsy misy fotsy. Ao amin'ireo alika mainty sy mainty, dia misy teboka roa ambonin'ireo maso ireo, eo amin'ny sisin'ny volomaso, manjavona mankamin'ny takolaka, fa aza tonga any ambanin'ny sofina. Ary koa eo amin'ny tenda, eo ambanin'ny rambony sy amin'ny tongotra sy ny tratra. Ny marika marika amin'ny tratra dia tokony hiseho ho teboka roa, fa takelaka tratra no azo ekena.
pug voalavo terrier Mix alika kely amidy
Alika be herim-po, be saina, mpankato, miasa ny Beauceron. Vonona sy vonona ny hampifaly, miavaka amin'ny fanofanana ny fankatoavana, haingana dia haingana ny mahatakatra sy mamaly ny baikon'ny tompony. Ny Beauceron dia afaka miasa polisy, satria tsy mivadika, manam-paharetana, mahatoky, tsy misy tahotra ary mitandrina tsara, afaka mamantatra loza. Alika mpiambina voajanahary sy mendrika izy io izay tia miasa sy manao spaoro amin'ny toerana malalaka. Iray amin'ny talenta marobe hafa koa ny miasa amin'ny alika mpiandry. Mety manandrana mandroaka olona sy zavatra hafa eo imasony izany ary mila ampianarina fa tsy ekena izany. Misy toerana azonao alika alika izay ahafahan'izy ireo mampiseho ny fahaizany miompy amin'ny andian'ondry. Ity dia fomba tsara indrindra ahafahan'izy ireo mamoaka angovo miaraka amin'izay miasa ny sainy. Amin'ny fampihetseham-batana ampy dia ho tony ny Beauceron anao. Ho tsara amin'ny alika fantany ary afaka mianatra mifanerasera amin'ny alika sy saka hafa. Tsy tokony avela irery mandritra ny fotoana maharitra izany raha tsy misy fanatanjahan-tena. lalina Training miaraka amin'ny tompony mafy orina dia ilaina, miaraka amin'ny habetsaky ny fanatanjahan-tena mety ary mpitarika fonosana mafy orina, mba hamoronana alika milamina sy mankatò. hifanerasera tena tsara rehefa tanora hiadiana amin'ny fironana mahery setra ary aza hadino ny mitazona ny alika rehefa misy alika hafa. Ampianaro manaja ny olombelona ity alika ity amin'ny tsy famelana azy mitsambikina ary tsy mamela azy hiditra amin'ny vavahady aloha. Ny olombelona dia tsy maintsy manao ny alika ombelahin-tongony eo anilany na ao aoriany rehefa mandeha . Izy io dia nanome valiny miavaka amin'ny maha-mpiambina ny fananana azy, nefa kosa dia raisina ho toy ny alika mpiara-miasa. Ny tanjona amin'ny fampiofanana an'io alika io dia ny hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny fonosana iray manontolo dia miasa eo ambanin'ny tsipika mpitondra tokana ary voafaritra mazava tsara ary apetraka ny fitsipika. Ianao sy ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Izay no fomba tokana hahombiazan ny fifandraisanareo. Rehefa voaofana tsara sy ifaneraserana ara-dalàna dia alika tena tsara sy mpiara-mitory amin'ny fianakaviana lehibe izany. Mila fantarina hoe iza no sefo ary avy eo hanaraka izany , saingy tadidio fa ity alika tena miaro ity dia tsy manaraka afa-tsy olona matanjaka. Raha manana saina matanjaka noho ianao izy dia antenainao hanaraka AZY. Ny Beauceron amin'ny ankapobeny dia tsara amin'ny ankizy raha mahita ny olombelona ho toy ny tarehimarika ananany izy ary nifanerasera. Hankatò ny baiko avy amin'ny olona rehetra ao amin'ny fianakaviana izany. Mitombo haingana ity zana-kazo mahery vaika ity, mahatratra 40 kilao eo amin'ny faha-3 taonany monja. Mety hahagaga ny zaza kely izany. Ny alika kely dia mavitrika ary miadana amin'ny fahamatorana. Ny Beauceron dia tokony hifaneraserana ara-dalàna sy tsara. Beauceron iray izay mifanerasera tsara ary tezaina dia mandeha tsara amin'ny toe-javatra mahazatra miaraka amin'ny ankizy, ary miantoka ihany koa fa tsy hisy olana ny alika sy biby hafa.
Hahavony: 24 - 27 ½ santimetatra (32 - 70 cm)
Lanja: Mahatratra 110 pounds (50 kg)
Ny Beauceron amin'ny ankapobeny dia karazany salama sy mateza. Misy andalana sasany mora mitsonika ary toy ny karazany mihoatra ny 40 pounds, ny Beaucerons dia mora voan'ny tsimok'aretina. Dimy amby sivifolo isan-jaton'ny mpiompy rehetra ao Etazonia no manana tahiry voamarina hip ihany.
Ny Beauceron dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampiasaina tsara izany. Mavitrika ao an-trano izy ireo ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny.
Ny Beauceron dia karazan'asa miasa izay mila be dia be fanatanjahan-tena ara-tsaina sy ara-batana . Manao asa tsara indrindra izy ireo amin'ny karazana asa sasany hatao. Raha tsy tanteraka tanteraka ny vatany sy ny sain'izy ireo dia ho sarotra tanterahina ary Handringanana . Tsy afa-po amin'ny boribory boribory intelo isan'andro izy ireo. Mila karazany izy ireo. Raiso izy ireo dia lavitra, mandritra izany dia afaka mihazakazaka afaka amin'ny tadiny sy milalao izy ireo (amin'ny faritra azo antoka). Raha toa samy mankafy azy ianareo roa, dia misorata fampianarana amin'ny lalam-piofanana hampiofanana amin'ny hazandrano na hifaninana amin'ny kilasy fahaizana mandroso (na dia eo amin'ny fifaninanana aza dia mety tsy hahomby kokoa noho ny karazany mety kokoa). Ampianaro hanaja ny olombelona ity alika ity, mandrehitra ny lohany, miditra sy mivoaka ny vavahady sy ny vavahady aorian'ny vahoaka.
Ankizy 6 ka hatramin'ny 7 eo ho eo
Ny palitaon'ny Beauceron dia tsy mila fiheverana be. Ny fikolokoloana tsindraindray amin'ny fijerena bebe kokoa mandritra ny fotoana anafanan'ny alika dia ampy. Beaucerons dia mpandatsa-dra.
Mahalana ny Beauceron ao Etazonia. Izy io dia karazan'omby mpiompy frantsay izay ny rakitsoratra tranainy indrindra dia tamin'ny andron'ny sora-tanana Renaissance tamin'ny 1578. Tamin'ny 1863 dia nisy lehilahy iray antsoina hoe Pierre Megnin nanavaka karazana domba roa, ny iray manana palitao lava, izay nanjary fantatra amin'ny anarana hoe Briard , ary ny iray hafa manana palitao fohy, izay lasa Beauceron. Tamin'ny 1863 dia naseho ny Beauceron tao amin'ny Exposition Canine voalohany tao Paris. Tamin'ny 1897 dia natsangana ny klioban'ny alika mpiandry ondry voalohany ary samy noraisina tao ny Beauceron sy ny Briard. Talohan'ny 1889 ny Beauceron sy Briard dia nanana ny lazany ho mpiambina mpiandry ondry izay be herim-po fa iray izay mirona kokoa hamikitra sy hanaikitra amin'ny fiarovana ny ondriny. Ny toetran'ireo karazana roa ireo dia nihanalefaka tamin'ny alàlan'ny fiompiana voafantina. Tamin'ny taona 1889, napetraka ny anarana sy ny fenitra. Tamin'ny taona 1911 dia natsangana ny klioba mitokana ho an'ny Beauceron, izay nanokana azy tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Briard . Ny Beauceron dia mpiandry ondry amin'ny toerana malalaka miaro ondry miaraka amin'ny biby fiompy hafa. Nampiasaina tamin'ny tafika koa ny karazany. Tsy niraharaha ny baomba nipoaka na ny afom-basy, ireo alika ireo dia nampiasaina handefasana hafatra, hitadiavana toeram-pitrandrahana, handray lalana, hanohana ireo hetsika komandy, hitady ireo maratra, ary hitondra sakafo sy bala ho any amin'ny lohalaharana Ny Beauceron, toy ny karazany fiandrasana ondry, dia mora ny mampiofana asa mihoatra ny fiandrasana ondry na andiany. Ny fahatoniany sy ny fahafahany hanaraka baiko tsy misy fisalasalana dia naseho nandritra ny ady lehibe roa tany Eropa. Androany io alika miasa miasa matotra io dia mbola ampiasaina ho mpiandry, alika mpiambina ary nataon'ny polisy sy ny tafika frantsay. Ny karazany dia mahazo vahana any Eropa Andrefana sy Amerika Avaratra amin'ny maha mpiambina fianakaviana sy mpiara-mitory azy, saingy mbola tsy fahita firy izy ireo. Ny Beauceron dia nekena ho ao amin'ny AKC tamin'ny 2006 teo ambany vondrona mpiandry. Ny sasany amin'ireo talenta Beaucerons dia ny fanarahan-dia, ny fiandrasana, ny mpiambina, ny fiambenana, ny asan'ny polisy, ny asa miaramila, ny hakingana, ny fankatoavana amin'ny fifaninanana, ny French Ring Sport ary ny Schutzhund.
NABC = Club Beauceron Amerikana Avaratra
IntCH Arc's Un Reve Realize CGCA RA (Camo) the harlequin Beauceron at 8 months old— 'Camo dia mifaninana amin'ny AKC Obedience, Rally and Confirmation. Mampiofana ho an'ny Agility koa izy. Ary alika mpiambina fanairana / fivezivezena ara-pahasalamana izy. Camo dia manana fotoana be dia be hilalaovana miaraka aminy Tsara -bibiana ary manonofy fomba vaovao hihaikana ny tompony. '
labrador sy chihuahua afangaro alika kely
IntCH Arc's Un Reve Realize CGCA RA (Camo) the harlequin Beauceron amin'ny 8 volana miasa ho Alika Medical Alert / Mobility Service.
Abbee the Beauceron amin'ny faha-6 taonany— 'Nahazo an'i Abbee the Beauceron isika tamin'ny faha-6 volana taorian'ny famonjena. Nolazaina taminay fa mahery setra sy tsy azo ampiharina izy. Izy dia ny mifanohitra tanteraka amin'ny herinandro aorianay momba azy ao an-tranonay. Izy dia mitondra ireo toetra rehetra voatanisa ao amin'ny pejin'ny fampahalalana ho an'ny taratasy! Mazava ho azy fa karazana iray tsy takatra, toy ny alika mpiaro maro. Nametraka fotoana sy ezaka be dia be izahay tamin'ny fanabeazana ny tenanay ary nahazo valisoa imbetsaka tamin'ny fanaovanay izany alika lehibe izany! '
'Abbee the Beauceron amin'ny 8 volana miasa ny omby. Tena voajanahary izy. '
Abbee the Beauceron amin'ny 8 volana miasa ny omby.
Pony ilay vehivavy Beauceron amin'ny 4 taona milanja 80 pounds
Alika kely Beauceron amin'ny 10 herinandro— 'This is Glowing Ember de Nanrox aka Ember sary tamin'ny 10 herinandro. Izy dia alika kely mavitrika tokoa ary tia milalao kilalao isan-karazany ary mifanerasera tsara amin'ny biby hafa ao an-trano ao anatin'izany ny hafa alika , saka SY chinchillas . Tena marani-tsaina izy ary mianatra haingana miaraka amin'ny fanamafisana tsara ary manaraka ny olony na aiza na aiza alehany. Rehefa ampy taona izy dia handray anjara amin'ny fahaizany mandanjalanja. '
laboratoara mainty sy fifangaroan'ny rottweiler
Taz the Beauceron amin'ny faha-3 1/2 taona nisamborana Frisbee iray— 'Nanomboka tamina trano tsara i Taz ary avy eo niharan'ny fahasahiranana ny fianakaviany, ka dia naverin'ilay mpiompy izy ireo ho famonjena azy, izay fomba nitondranay azy ho an'ny fianakavianay. Izy dia miavaka amin'ny fahakinganana, fiompiana, Frisbee ary ny fanarahan-dia. Taz dia tsara amin'ny toetry ny andro rehetra satria manana trano any Colorado sy Arizona izahay. Tahaka ny Beaucerons rehetra, somary manavakavaka ny olon-tsy fantatra izy, fa rehefa mahazo aina izy dia lasa milina milelaka. '
Haunter the Beauceron amin'ny 2 taona (UKC CH. Wandering Spirit Vom Wildweg CGC) - 'Iray ihany ny karazana alika afaka mahavita azy rehetra .... Fiompiana, Fiarovana, hakingana, Fankatoavana, Famolavolana, Schutzhund. Fanarahana, Alika Serivisy, Polisy K9, Flyball…. Fampahafantarana ny Beauceron. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Beauceron
Sary Beauceron 1
rat terrier sy chihuahua mifangaro
mikofoka alika isan-kerinandro
shar pei basset hound mix amidy
laboratoara mainty mifangaro retriever volamena
st charles spaniel poodle mifangaro